Minisiteran’ny Fahasalamana: nisongadina ny vokatra | NewsMada
Minisiteran’ny Fahasalamana: nisongadina ny vokatra
Anisan’ny minisitera nahavita dingana eo amin’ny sehatry ny fanatanjahantena ny an’ny Fahasalamana (Min San). Nampisongadina ireo mpiasa eo anivon’ity minisitera ity sy ny atletany avokoa ireo fifaninanana nandraisany anjara, teto an-toerana na ny tany ivelany.
Porofon’izany, voahosotra ho tompondakan’Analamanga ny savate boxe française (3FB), teo amin’ny fanatanjahantena eo anivon’ny mpiasam-panjakana (Asief), nandrombaka medaly volamena valo. Voahosotra ho minisitera mendrika ihany koa ka notolorana amboara.
Toy izany koa ny basikety, sokajy vehivavy. Hiatrika ny fifaninanam-pirenena, hatao any Toamasina, eo amin’ity lalao Asief ity izy ireo.
Teo amin’ny karate indray, nahazo ny laharana fahefatra, tamin’ny fampisehoana ny “kata”, teo amin’ny Cup Africa, natao tany Johannesburg, Afrika Atsimo ny 1 septambra lasa teo, ny dokotera Rabakomalala Lucie, manana ny fehinkibo mainty, 5 è dan.
Ho an’ny atletisma, zava-bita roa vaovao, eo amin’ny sokajy “junior”, montsan-dRakotonirainy Nantenaina, nandritra ny fiofanana efa-bolana, nataony tany Sina: ny teo amin’ny 100 m, vitany tao anatin’ny 10 s 50 %, sy ny 200 m, tao anatin’ny 21 s 42%.
Ho an’i Koloina kosa, nahazo medaly volamena roa teo amin’ny 200 m sy ny 400 m izy, teo amin’ny fiatrehana ny lalao CJSOI, notanterahina tany Djibouti, ny volana avrily lasa teo. Noraisin’ny minisitry ny Fahasalamana, teny Ambohidahy ny alatsinainy 10 septambra lasa teo, ireo atleta rehetra ireo, notolorany fankasitrahana noho ny zava-bita, tsy ho an’ny minisitera ihany fa indrindra koa ho an’ny firenena.